thinzar's blog: ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာမိတော့
အခု PC ရှေ့မှာသာ ထိုင်နေတာ။ မျက်စိထဲမှာ အနီရယ်၊ အပြာရယ်၊ အနက်ရယ်၊ သဲမှုန့်တွေရယ်ဘဲ မြင်ရပြီး ခေါင်းထဲမှာ မူးနောက်နေတယ်။ ဇက်ကြောတွေလည်း တက်နေတယ်။ မျက်မှန်တောင် ပါဝါ တက်သွားလား မသိဘူး။
ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ပါဘူး။ မနေ့ညက Spider Man III သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ ရလဒ်လေ။ ကြည့်တာမှ screen နား ကပ်နေတဲ့ ဒုတိယ ခုံကနေ ကြည့်ခဲ့တာ။ ထိပ်ဆုံး ရုံတင်တဲ့ ရက်မှာ ဇွဲကြီးကြီးနဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ ကြည့်တော့ သူများတွေက Spider Man fan လို့ ထင်ဦးမယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီလို .. Man .. တွေ ပါတဲ့ကားကို ကြည့်တာ ဒါပထမဆုံး အကြိမ်။ ခေါင်းကို ဘယ်လှည့်လိုက် ညာလှည့်လိုက် ကိုယ်ကို စောင်းလိုက် မတ်လိုက်နဲ့ ကြည့်နေတာ ရုပ်ရှင် ဘယ်လို ပြီးသွားလဲတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဘေးကလူ တွေတော့ တုတ်တုတ်မလှုပ်။ ငှက်တွေလို ၁၈ဝ ဒီဂရီ မြင်ရတဲ့ မျက်စိမျိုးရှိကြသလား မသိပါဘူး။ Spider Man fan တွေကို တကယ်မေးကြည့်ချင်တယ်.. ဘာကို ကြိုက်ကြတာလဲဟင်???
အရင်တလောကတောင် Malaysia လူမျိုးတွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် “လူသား” တစ်မျိုးတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆပြီး ထွင်ပါသေးတယ်။ Cicak Man (ချိချ မဲန်း) - အိမ်မြှောင် လူသားတဲ့။ အဲဒီ ရုပ်ရှင် ရုံတင်တော့ ဝင်ငွေတော့ တော်တော် ရလိုက်တယ်ဆိုဘဲ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်။ နင်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ကော ဘာ လူသား ရှိလဲတဲ့။ တော်တော် စဉ်းစား ယူလိုက်ရတယ်။ ရှိတာပေါ့နော်။ “ကိုပူစီ” လေ.. တစ်နေ့တော့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
နင်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ကော ဘာ လူသား ရှိလဲတဲ့။
“လင်းနို့လူသား” ရှိတယ်လို့ ဖြေလိုက်လေ :P
2/5/07 4:21 PM
2/5/07 7:04 PM
ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့်သူမရှိလို့ လောလောဆယ် မျက်လှည့်ပြစားနေရရှာတယ်. သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာ မသဉ္ဇာရဲ့ လက်ထဲမှာ လုံးလုံးလျားလျား ကျရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတယ်...
3/5/07 9:31 AM
ကိုမျိုးကျော်ထွန်း >> လင်းနို့လူသား လို့ ပြောရင် Bat Man ကို ခိုးထားပါတယ် ဖြစ်ဦးမယ်။
ကိုကျော်ဇေယျ >> မဟာလူသား ဆိုတာတော့ သဉ္ဖာလည်း မသိဘူး.. ဘယ်နားကလဲဟင်..
ကိုရန်အောင် >> သွပ်သွပ်သွပ် ဆိုတော့ ကိုအီကြာကွေးပေါ့။ စက္ကောမက လူ ကြီးမလား။ ရုပ်ရှင် ရိုက်မယ်ဆိုရင် သဉ္ဖာတော့ ကိုပူစီကိုဘဲ ရိုက်မယ်။ :D
3/5/07 3:55 PM
မသဉ္ဇာရေ။ ဟိုးအရင်ရုပ်ပြခေတ်တုန်းက ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းပါးပါး ဖတ်ဖူးလိုက်တဲ့ ရွှေခေါင်းပြောင်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်း၊ ငတက်ပြားလို သူခိုးပေမယ့် အမှန်တရားနဲ့ အားနည်းတဲ့လူတန်းစားဘက်က ရပ်တည်တတ်တဲ့ လူစွမ်းကောင်း၊ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုပူစီကာတွန်းတွေလည်း ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ကိုပူစီ မတိုင်ခင်က ဒီလုံးတို့ဆိုရင်လည်း ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် (ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်ကကြိုက်ခဲ့တာပဲ) အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဟာသဆန်ဆန် စုံထောက်ကြီး ကြံ့ဗဟုန်း(သေသေချာချာမမှတ်မိပါ) ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာ။ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့အထဲက ကာတွန်းကိုခိန်ရဲ့ ဟာသစုံထောက် (နာမည်က မေ့နေပြန်ပြီဗျာ)၊ နောက်ပြီး ဦးရှံစား (ဦးအောင်ရှိန်ရဲ့လက်ရာ) စသည်ဖြင့် အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
9/5/07 12:51 AM
ကိုမျက်လုံးလဲ ကာတွန်းတော်တော် ဖတ်တာဘဲ။ :D စုံထောက်ကြီး ကြံ့ဗဟုန်း တို့ ဘာတို့ခေတ်တော့ သဉ္ဇာ မမှီလိုက်ဘူး။
14/5/07 12:05 PM
i suggest, to do Tamain Paw tut :D Myanmar Ludar Zat Laite :D
20/11/07 3:56 PM
ko pu said...
ကိုပူစီက myanmar ဇာတ်လိုက်နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်တာလဲဟင်..?
( ta kae ma ti lo may tar par !)
အမ်.. စပိုင်ဒါမန်းက ပင့်ကူလို အစွမ်းရှိတယ်လေ။ ဘတ်မန်းက လင်းနို့။ မလေးရှားက ချိချမန်းက အိမ်မြှောင်.. ပြီးတော့ သူတို့တွေ အားလုံးတူညီတာ တစ်ခုက သာမန်အချိန်မှာ ရိုးရိုးလူ၊ အကျီ င်္ပြောင်းဝတ်လိုက်ရင် အစွမ်းရှိသွားရော။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်ကာတွန်းတွေထဲမှာ အဲလို တိရိစာ္ဆန်တစ်ကောင်ကောင်လို အစွမ်းသတ္တိရှိတာ ကိုပူစီကိုဘဲ စဉ်းစားမိလို့လေ။ ပူစီဆိုတော့ ကြောင်ပေ့ါ.. သူ့မှာ သိပ္ပံဝတ်စုံလည်း ရှိတယ်လေ။ မဟုတ်ဘူးလား။
10/6/09 1:45 PM
Intro to Hacking (၁)
ကျမနှင့် ဘလော့ဂ် ပြသနာ